Izindaba - Yini izinto ezibolayo ngokubolayo
Yini izinto ezibolayo ngokubolayo
Incazelo ye-bioplastics: uma ama-plastiki asuselwa ku-bio, achazwa ngokuthi yi-bioplastics, biodegradable, noma kokubili. Isisekelo se-Bio sisho ukuthi umkhiqizo (ingxenye) uvela ku-biomass (isitshalo). I-Bioplastics ivela emmbileni, umoba noma i-cellulose. Ukwehlukaniswa kwemvelo kwe-bioplastics kuncike ekwakhekeni kwamakhemikhali. Isibonelo, i-100% bio based, i-bioplastics akusho ukuthi iyabola.
Amapulasitiki angahlukaniswa yiplastikhi angabola ngesenzo sezinto eziphilayo, imvamisa ama-microbes, angene emanzini, isikhutha, kanye ne-biomass.
Ngenkathi amagama athi “bioplastic” nethi “biodegradable plastic” afana, awafani. Akuwona wonke ama-bioplastics abolayo.
I-Biodegradation inqubo yamakhemikhali lapho ama-microorganisms atholakalayo emvelweni eguqula izinto zibe izinto zemvelo ezifana namanzi, i-carbon dioxide kanye nomquba (ngaphandle kwezithasiselo zokwenziwa). Inqubo ye-biodegradation incike ezimweni ezizungezile zemvelo (isib. Indawo noma izinga lokushisa), impahla kanye nokusetshenziswa.
Ukuthuthukiswa kwama-bioplastics namuhla
Ama-polymers amandla avuselelekayo angahlukaniswa abe ama-starch polymers, i-polylactic acid (PLA) i-PHB polyhydroxyalkanoates (PHA) polymer cellulose.
Umphumela womhlaba wonke we-bioplastics uzoba amathani ayizigidi ezingama-2.11 ngo-2019 namathani ayizigidi ezingama-2.43 ngo-2024, okulindeleke ukuthi ande kancane. Uma kuqhathaniswa nomkhiqizo womhlaba wonke ongaphezu kwezigidi ezingama-359 ngonyaka / ithani lamapulasitiki, kusabalwa ingxenye encane. Ukupakisha okufanayo kwepulasitiki (okuqinile nokuguquguqukayo) kulawula umthamo wokukhiqiza we-bioplastics womhlaba jikelele, ngaphezulu kwengxenye (53%) kuyo yonke imakethe ye-bioplastics ngonyaka odlule.
Umqondo ongemuva kwama-polymer asuselwa ku-bio ukufaka i-fossil carbon ngezinsizakusebenza ezivuselelekayo nezinobungani bemvelo (ushukela ezitshalweni), ngamanye amagama, ukukhiqiza ama-polymers emithonjeni yemvelo evuselelekayo, nokubola ngokushesha ukupakisha bese ubuyela emvelweni.
Imikhiqizo yethu yonke i-100% iyabola, okuyi-EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, evunyelwe.
Izikhwama zemfucumfucu ezingabizi, Ukusonga Okugoqekayo Okubolayo, Ifilimu Elolayo Lokubolayo, Izikhwama Ezinokwakhiwa, Ukugoqwa Kwe-Eco Cling Wrap Ushukela, Izikhwama Zodoti Ezilahlwayo Ezilahlayo,